Cybersecurity, Software na GNU / Linux: adzọ atọ zuru oke | Site na Linux
La «Ciberseguridad» dị ka e gosiri n’isiokwu bu nke a ụzọ "Ozi Nche: History, Terminology and Field of Action", bụ ọzụzụ metụtara na-akpachi anya na ubi nke «Informática» mara dika «Seguridad de la Información». Nke ozo, na nkenke, abughi ihe ozo kariri ihe omuma nke mejupụtara nchebe nke ihe nzuzo, iguzosi ike n'ezi ihe na nnweta nke «Información» jikọtara na a «Sujeto», yana sistemụ metụtara ọgwụgwọ ya, n'ime nzukọ.
N'ihi ya, «Ciberseguridad» o «Seguridad Cibernética» bụ abụrụ ọzụzụ na raara nye kpamkpam maka nchebe nke «información computarizada», nke ahụ bụ, hụ na «Información» nke ahụ bi n'ime ụfọdụ «Ciber-infraestructura», dị ka, netwọkụ nkwukọrịta, ma ọ bụ n'ime usoro netwọkụ ndị a kwere. Agbanyeghị, maka ndị ọzọ, Cybersecurity pụtara nanị ichebe a «Infraestructura de información» site na mbuso agha anụ ahụ ma ọ bụ nke eletrọniki.
Dị ka Eric A. Fischer si kwuo «Ciberseguridad» o «Seguridad Cibernética» na-ezo aka 3 ihe:
“Usoro nchebe na teknụzụ ozi; ozi o nwere, usoro, nnyefe, ihe jikọrọ anụ ahụ na mebere (cyberspace); na ogo nchedo nke sitere na itinye usoro ndị a ”.
Nzube ya bụ ka e chekwaa «Patrimonio Tecnológico» oha na eze, nke na-agafe na netwọkụ site na ICT iji gbochie ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ otu dị iche iche ịnwa ma ọ bụ imebi usoro ahịrị anọ ahụ ma ọ bụ ụkpụrụ nke ozi na-agafe na cyber, nke bụ:
Nkwenye: Ihe data a na-ebugharị ma ọ bụ echekwara bụ nke onwe, ndị mmadụ nwere ike ịhụ ya.
Iguzosi ike n'ezi ihe: Ihe data a na-ebunye ma ọ bụ echekwara bụ eziokwu, belụsọ maka njehie emere na nchekwa ma ọ bụ njem.
Enweta: Ihe data a bufere ma ọ bụ echekwara ga-enwerịrị ike ịnweta, ka o kwere mee, nye ndị niile enyere ikike.
Enweghị akwụkwọ: Ihe data a bufere ma ọ bụ echekwara bụ nke enweghị mgbagha, ọkachasị mgbe asambodo dijitalụ a na-anabata, mbinye aka dijitalụ, ma ọ bụ ihe nchọpụta ndị ọzọ akọwapụtara.
1.1 Kedu ihe bụ cybersecurity?
2 Cybersecurity, Ihe ngwanrọ na GNU / Linux
2.1 Ele ihe ugbu a
2.2 Uru nke ngwanrọ efu na oghere mmalite
3 Linux Distros na Cybersecurity
Kedu ihe bụ cybersecurity?
Nkowa n'uzo di uzo nke echiche nke «Ciberseguridad»anyị nwere ike iji dị ka a echiche echiche mepụtara ọkachamara na «Seguridad IT» de ISACA n'otu n'ime nzukọ ndị a maara dị ka «bSecure Conference o IT Master CON», gini ka okwuru:
"Cybersecurity bụ nchebe nke ihe ọmụma ọmụma, site na ọgwụgwọ nke egwu nke na-etinye ihe ize ndụ nke ozi ahụ na-arụ ọrụ, na-echekwa ma na-ebuga ya site na usoro ihe ọmụma jikọtara ọnụ."
Na-akọwapụta nke ahụ dịka ọkọlọtọ «ISO 27001» echiche nke «activo de información» Akọwaputara ya dika:
"Ihe omuma ma obu data nwere ihe bara uru maka ulo oru, ebe usoro ihe omuma bu ihe ndi ozo, oru, ihe omuma ihe omuma ma obu ihe ndi ozo nke na enyere ikike ya aka."
Ya mere, na nchịkọta, enwere ike ịsị ya na nkenke zuru oke na la «Ciberseguridad» Ihe ọ na-elekwasị anya bụ nchebe nke ozi dijitalụ nke bi na sistemụ njikọ. N'ihi ya, ọ bụ n'ime ihe niile gbasara «Seguridad de la Información».
Cybersecurity, Ihe ngwanrọ na GNU / Linux
Ele ihe ugbu a
N'ime oge gara aga na nke ugbu a, egosiri na la «Ciberseguridad» bu ihe di nkpa n’oge anyi «Sociedad de la Información», ma o bu nke onwe, nke azụmahịa ma o bu nke ochichi.
N'oge na-adịbeghị anya, anyị ahụla ịrị elu na ike nke dị iche iche «ataques cibernéticos», abụọ «organizaciones criminales» nye ndi mmadu ndi mmadu na ndi mmadu, dika site na mba rue mba, nke kere otutu nchegbu na ndi oru ma obu ndi mmadu, dika ndi oru IT, ndi mmemme, ndi oru ulo oru na ndi isi nke mba.
Ọ bụ ya mere, ọtụtụ na-ewerekarị usoro kọmputa ha «Seguridad Cibernética», dị ka ojiji nke Antivirus, Firewalls, IDS / IPS, VPNs, ma ọ bụ ndị ọzọ, nke na-agụnyekarị Sistemụ Ọrụ, n'ogo nke kọmputa na sava nke nyiwe teknụzụ ha.
Ma ọ bụ ezie, nyiwe «Sistemas Operativos» na «Programas de Seguridad Informática» azụmahịa na nkeonwe dị ezigbo mmaHa bụkwa ebumnuche kachasị nke ọgụ onwe onye, ​​mkpokọta, azụmahịa ma ọ bụ steeti. Ọzọkwa, ha anaghị achọpụtakarị mmejọ ma ọ bụ mezie mmejọ na ọsọ nke ndị ọrụ nwere ike ịtụle ihe kachasị mma.
Uru nke ngwanrọ efu na oghere mmalite
Maka ihe ndị a na ndị ọzọ, Free Software, Linux dabeere Operating Systems na GNU-ụdị Mmemme (Free na Open) agbasaghị nwere a mma larịị nke mma na okwu nke «Ciberseguridad», ma maka ndị ọrụ nkịtị na maka gburugburu ọha na nke onwe.
Ma ọ bụ, na ọkwa nke ndị ọrụ dị mfe maka kọmputa nke sava nke nnukwu ihe nrụpụta ma ọ bụ. Agaghị agụta, ma ọ bụ n'ogo nchebe ma ọ bụ ọgụ las «Plataformas de Software Libre, Código Abierto y Linux» a na-ahọrọ ha maka ebumnuche ndị a.
Na ihe a niile, ekele «cuatro (4) leyes básicas del Software Libre» nke na-enye ohere nzaghachi ọ bụghị naanị ịrụ ọrụ nke ọma ma dị irè karị, kamakwa dị ike, dịgasị iche iche yana yana ntuziaka akọwapụtara nke ọma. N'agbanyeghị nke ahụ, n'agbanyeghị boro ebubo buru ibu na «Software Libre, Código Abierto y Linux».
Linux Distros na Cybersecurity
Taa, e nwere ọtụtụ «Distros Linux» (na BSD) nke na - eme ka ọ dị mfe iji dozie ma ọ bụ melite nchebe anyị banyere «Ciberseguridad», dị ka izu nzuzo ọtụtụ mmadụ, ma ọ bụ usoro mwakpo anyị ma ọ bụ usoro nke ịbanye n'ime «Seguridad Cibernética» nke ndị ọzọ.
Nke a bụ ezigbo ndepụta nke ndị kacha mara amara taa, ma maka kọmputa nke ndị ọrụ dị mfe yana maka sava nke nnukwu ihe nrụpụta ma ọ bụ na ọ bụghị, maka nchọpụta na-esote ha:
Netwọk Ngwaọrụ Netwọk
Okpokoro Web Security Framework
Ihe ọ bụla, ndị «Distro Linux» Nke a họọrọ iji, ma ọ bụ n'onwe ya ma ọ bụ ọkachamara, n'ụlọ ma ọ bụ na-arụ ọrụ, ọ ga-adị mkpa iburu n'uche na naanị iji ya, enweghị nkwenye zuru oke na a ga-echebe onye ọrụ pụọ n'ihe egwu ọ bụla ma ọ bụ iyi egwu ya «Seguridad Cibernética».
Ya mere, ihe kachasị mkpa ga-abụ mmezi «mejores prácticas» de «Seguridad Informática», ma n'onwe ya, na ndị ndị ọrụ IT na-eduzi n'ime nzukọ ebe ọ na-arụ ọrụ. Cheta, ọrụ mgbe niile ga-abụ ihe na-ekweghị na njikọ na yinye nke «Seguridad Informática». Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịmatakwu n’ime isiokwu ahụ, anyị na-akwado nnukwu a Nkọwa nke usoro Cybersecurity.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Cybersecurity, Software na GNU / Linux: Triad zuru oke
Ebee ka Hyperbola, Trisquel, GuiSD, wdg?
Daalụ maka okwu gị na aro gị. N'ezie, ọ ga-adị mma ịgụnye nke mbụ 2 n'ihi na ha bụ n'efu Distros. Site na nke atọ (GuiSD) enwetaghị m weebụsaịtị.
Na-adọrọ mmasị, mana m gaara enwe mmasị na «ezigbo Ndepụta nke ndị kacha mara amara» ọ gaara abụ ihe bara uru iji jikọta njikọ kwekọrọ na ngwa ọ bụla.
Daalụ maka ịkekọrịta ozi a.
Ekele, Jean. Ihe ole ka dị, URL ha dị iche iche hapụrụ maka onye ọrụ ọ bụla ime nyocha nke ha.
Abụ m onye injinia na isiokwu banyere ịntanetị na-akpọ m uche. Echere m na m ga-aga ebe ọ bụ na n'onwe m ọ dị oke oke ịga n'ihu n'ihi enweghị oge na nraranye. Achọtala m ihe a Nke ahụ mara ezigbo mma, dịkwa nso n'ụlọ. Ka anyị lee ma ị ga-enye m echiche maka ya.
Daalụ ma dị ezigbo mma post!
Ekele, Vic! Daalụ maka okwu gị. Banyere Usoro a na Industrial Cybersecurity na Critical Infrastructures, a na-ahụ ọdịnaya na usoro a na-ekwu nke ọma ma ọ bụrụ na ọ dị gị nso, mgbe ahụ ọ ka mma ... Olileanya ị nwere ike ime ya ma mezuo atụmanya gị ...
Salut à Toi ngwa na netwọkụ mmekọrịta maka ekwuputaghị ozi